တရုတ်အရည်အသွေးမြင့် Tattoo Pen Kit အလူမီနီယမ်အဖုံးမရှိ TZ-008 ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ။ | မော်လမြိုင်
1) Tattoo ကလောင်စက် 1pcs
၂) Power Supply 1pcs
၃) Foot Switch 1pcs
၄) LBB ကျည်တောင့်များအပ်အပ် 40pcs (တစ်ခုချင်းစီအတွက် 10pcs) 3rl, 5rl, 5m1,7m1
၁ ။ တက်တူးသေနတ်များကိုအထူးဂရုပြုရန်လိုသည်။ ဤစက်များကိုမကိုင်တွယ်မီကြိုတင်ကာကွယ်မှုပြုလုပ်ပါ။ လက်များကိုဘက်တီးရီးယားဆပ်ပြာဖြင့်ဆေးကြောပါသို့မဟုတ်စေးလက်အိတ်များကိုဝတ်ပါ။
၂။ မိမိကိုယ်ကိုသေနတ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေပါ။ ဘောင်သည်အပိုင်းပိုင်းအားလုံးကိုအတူတကွကိုင်ထားသည်။ ထိုအခါသင်၌စက်ကိုစွမ်းအားပေးသည့်လျှပ်စစ်သံလိုက်ကွိုင်နှစ်ခုရှိသည်။ ကွိုင်များသည်လျင်မြန်သောအပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော armature bar ကိုလျင်မြန်စွာရွှေ့သည်။ power supply သည် electromagnetic coils နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ဤအရာအလုံးစုံအစိတ်အပိုင်းများကိုလိုအပ်သကဲ့သို့ဖယ်ရှားသို့မဟုတ်အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
၃ ။ သေနတ်၏ချုပ်ကိုင်ထားစစ်ဆေးပါ။ ပြွန်အတွက်သေနတ်နှစ်ဖက်နှင့်သေနတ်အစွန်အဖျားရှိသည်။ ယင်းတို့ကို ဦး စားပေးသောအရှည်ထားပါ။ ချုပ်ကိုင်ထားသည့် screw နှစ်ခုကိုတင်းကျပ်ပေးပါ။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်အပ်သည်အစွန်အဖျားထက် ၂ မီလီမီတာထက်မပိုသော ၁ မီလီမီတာထက်မပိုသင့်ပါ။ အကယ်၍ သွေးများများလျှင်သင်၏အပ်သည်အလွန်ရှည်လွန်းသည်။
4. အပ်ထားပါ။ ကိရိယာအစုံနှင့်သင်ရရှိသောအပ်များကိုကြည့်ပါ။ သင့်တွင်ဆေးထိုးအပ်အရွယ်အစားအနည်းငယ်ရှိသင့်သည်။ အစွန်အဖျားဆီသို့ပြွန်ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အပ်တစ်ချောင်းကိုတပ်ဆင်ပါ။ တပ်ဆင်နေစဉ်အပ်မသုတ်မသွားစေရန်သတိထားပါ။
5. နို့သီးခေါင်းကိုလုံခြုံအောင်ထားပါ။ grommet ဟုလည်းလူသိများသောနို့သီးခေါင်းသည်အပ်ကိုတပ် ထား၍ သေနတ်၏အခြေအမြစ်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ အဆိုပါ armature ဘား pin ကိုအပေါ်နို့သီးခေါင်းချထားပါ။ အပ်၏တုံးအဆုံးကိုနို့သီးခေါင်းပေါ်စွဲကပ်ထားပါ။
၆။ အပ်ကိုချိန်ညှိပါ။ သင်ကဆုပ်ကိုင်မှုကိုတပ်ဆင်ပြီးတာနဲ့အပ်ဘယ်လောက်ထိတွေ့တယ်ဆိုတာကိုချိန်ညှိဖို့လိုတယ်။ ပြွန်ဗိုက်အားချိန်ညှိခြင်းဖြင့်အပ်၏ထိတွေ့မှုကိုသင်ညှိနိုင်သည်။ အဆိုပါပြွန် vise အဆိုပါ armature နှင့်အပ်အကြား၌ချိန်ညှိဝက်အူသည်။
ရှေ့သို့ ပွင့်လင်းသောအကြံပေးချက်များနှင့်အတူအနက်ရောင် silicone ပါးလွှာချည်တစ်ခါသုံးတက်တူးထိုးချုပ်ကိုင်ထား
နောက်တစ်ခု: တက်တူးဆေးထိုးအပ်အတွက် ၁၀၈mm မီလီမီတာအကာအကွယ်ပေးထားသောသိကောင်းစရာများ။
Beginner Tattoo ပစ္စည်းများ
တစ်ခါသုံးနား Piercing Kit
Professional Tattoo ပစ္စည်းများ
Tattoo စက် Professional Kit
ကြိုးမဲ့ Tattoo စက် Kit
Hummingbird တစ်ခါသုံးတက်တူး ၂၅ မီလီမီတာ